Kuvhiringidza kuvakwazve kwetemberi (1-6)
Vavengi vanomhan’ara kuna Mambo Atashasta (7-16)
Mhinduro yaAtashasta (17-22)
Temberi inomira kuvakwa (23, 24)
4 Vavengi vevaJudha nevaBhenjamini+ pavakanzwa kuti vaya vakanga vadzoka kubva kuutapwa+ vari kuvakira Jehovha Mwari waIsraeri temberi, 2 vakabva vakurumidza kuenda kuna Zerubhabheri nekuvakuru vedzimba dzemadzibaba vakati kwavari: “Ngativakei tese; nekuti nesuwo tinonamata* Mwari+ wenyu semi, uye tiri kubayira zvibayiro kwaari kubvira pamazuva aMambo Esari-hadhoni+ weAsiriya, uyo akatiunza kuno.”+ 3 Asi Zerubhabheri naJeshua nevamwe vakuru vese vedzimba dzemadzibaba aIsraeri vakati kwavari: “Hamuna kodzero yekuvaka imba yaMwari wedu pamwe chete nesu;+ tichaivakira Jehovha Mwari waIsraeri tega sezvatakarayirwa naMambo Koreshi, mambo wePezhiya.”+ 4 Vanhu vemunyika yacho vairamba vachinetesa vanhu* veJudha uye vachivaodza mwoyo kuti verege kuvaka.+ 5 Vakabhadhara vanachipangamazano kuti vavhiringidze zvirongwa zvavo+ mazuva ese aMambo Koreshi wePezhiya kusvikira pakutonga kwaMambo Dhariyasi+ wePezhiya. 6 Pakatanga Ahashivheroshi kutonga, vakanyora mashoko ekupomera vagari vemuJudha nemuJerusarema. 7 Uye mumazuva aMambo Atashasta wePezhiya, Bhishramu, Mitredhati, Tabheeri, nevamwe vake vese vakanyorera Mambo Atashasta tsamba; vakaiisa mumutauro wechiAramaiki,+ vachiinyora nemabhii echiAramaiki.* 8 * Rehumu jinda guru rehurumende naShimshai uyo aiva munyori vakanyorera Mambo Atashasta tsamba inotevera vachipomera Jerusarema: 9 (Yaibva kuna Rehumu jinda guru rehurumende naShimshai munyori, nevamwe vavo vese, vatongi nemagavhuna madiki, vanyori, vanhu vekuEreki,+ vaBhabhironi, vagari vemuSusa,+ kureva vaEramu,+ 10 nemamwe marudzi ese akatapwa naAsenapa uyo aiva akakurumbira uye airemekedzwa, akaagarisa mumaguta eSamariya,+ uye mamwe marudzi ese emunharaunda yeMhiri kweRwizi,* uye 11 aya ndiwo mashoko aiva mutsamba yavakamutumira.) “Kuna Mambo Atashasta, kubva kuvashandi venyu, varume vari munharaunda iri Mhiri kweRwizi: 12 Mambo ngaazive kuti vaJudha vaya vakakwidza kuno vachibva kwamuri vakasvika kuJerusarema. Vari kuvakazve guta riya rekupanduka uye rakaipa, uye vari kupedzisa masvingo+ nekugadziridza faundesheni. 13 Mambo ngaazive kuti kana guta iri rikavakwazve, masvingo aro akapera, havazobhadhari mutero wevanhu, mutero wezvinhu, kana mutero wenzira,+ uye zvichaita kuti nzvimbo dzemadzimambo dzinochengeterwa pfuma dzisawane pfuma. 14 Sezvo tichidya munyu wemumuzinda* uye zvazvisina kunaka kuti tione zvido zvamambo zvichivhiringidzwa, tatumira shoko iri kuti mambo azive zvinhu izvi, 15 kuitira kuti bhuku rezvakaitika remadzitateguru enyu riongororwe.+ Muchaona mubhuku rezvakaitika uye muchaziva kuti guta iri iguta rinopanduka, rinokanganisa madzimambo nematunhu, uye kubvira kare ragara riine vanhu vanopandutsa vanhu. Ndokusaka guta iri rakaparadzwa.+ 16 Tiri kuzivisa mambo kuti kana guta iri rikavakwazve, masvingo aro akapera, hamuzovi nesimba* munharaunda iri Mhiri kweRwizi.”+ 17 Mambo akatumira shoko kuna Rehumu jinda guru rehurumende naShimshai munyori wacho nevamwe vavo vese vaigara muSamariya nekunharaunda yese yeMhiri kweRwizi achiti: “Kwaziwai! 18 Gwaro ramakatitumira raverengwa zvakajeka* pamberi pangu. 19 Ndakapa murayiro pachibva paitwa ongororo, uye zvakaonekwa kuti kubvira kare guta racho raimukira madzimambo, richipanduka uye raiva nevanhu vairwisa madzimambo.+ 20 Jerusarema raiva nemadzimambo ane simba aitonga nharaunda yese yeMhiri kweRwizi, aibhadharwa mutero wevanhu, mutero wezvinhu, nemutero wenzira. 21 Saka rayirai kuti varume ava vamire kushanda, kuti guta racho rirege kuvakwazve kusvikira ndapa murayiro. 22 Ivai nechokwadi chekuti maona zvekuita panyaya iyi kuti zvido zvamambo zvirege kuramba zvichivhiringidzwa.”+ 23 Pashure pekunge gwaro raMambo Atashasta raverengwa pamberi paRehumu naShimshai munyori nevamwe vavo, ivo vakabva vangonanga kuJerusarema kuvaJudha, vakavamisa zvechisimba. 24 Panguva iyoyo ndipo pakamira basa paimba yaMwari yaiva muJerusarema; uye rakaramba rakamira kusvikira mugore rechipiri rekutonga kwaMambo Dhariyasi wePezhiya.+
^ ChiHeb., “tinotsvaga.”
^ ChiHeb., “vachinetesa maoko evanhu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “yakanyorwa muchiAramaiki ichibva yaiswa mune mumwe mutauro.”
^ ChiAramaiki ndicho chakatanga kushandiswa pakanyorwa Ezr 4:8 kusvika ku6:18.
^ Kana kuti “tichitambira mari inobva mumuzinda.”
^ ChiAram., “nemugove.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “raturikirwa uye raverengwa.”